Philippe Coutinho oo u sheegay Kooxda Barcelona inuu doonayo inuu ka tago bishaan & Halka uu ku sii jeedo oo durba la ogaaday – Gool FM
Philippe Coutinho oo u sheegay Kooxda Barcelona inuu doonayo inuu ka tago bishaan & Halka uu ku sii jeedo oo durba la ogaaday
Haaruun January 4, 2022
(Barcelona) 04 Jan 2022. Philippe Coutinho ayaa la soo warinayaa inuu u sheegay kooxda Barcelona inuu doonayo inuu ka tago, iyadoo durba la ogaaday horyaalka aan ahayn La Liga ee uu doonayo inuu ka ciyaaro.
Wargeyska Sport ayaa shaaca ka qaaday in Philippe Coutinho uu u sheegay kooxda Barcelona inuu doonayo inuu isaga tago bishaan Janaayo.
Kooxda Barca ayaa filaysay inay sii haysato xiddigan reer Brazil dhawr toddobaad ka hor, laakiin xaaladdu waa ay is beddeshay, iyadoo uu doorbidayo in la iibiyo suuqa bishan Janaayo.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Coutinho oo rajanayo inuu dib ugu laabto horyaalka Premier League, waxaana natiijada ugu macquulsani ay tahay in marka hore uu amaah ku eg ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka ku tago horyaalka Ingiriiska.
Miyuu Lukaku ciyaari doonaa kulanka ay Chelsea la ciyaareyso Tottenham Arbacada kaddib wada-hadalladii shalay?
Kylian Mbappé oo shaaciyay rajadadiisa sanadka 2022 ee Kooxda Paris Saint-Germain